Fiaraha-miasa : Firenena vahiny 10 hampiasa vola eto Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaFiaraha-miasa : Firenena vahiny 10 hampiasa vola eto Madagasikara
02/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maro ny fanakianana, tsy latsa-danja amin’izany koa ny fandotoana an’i Madagasikara any ivelany any amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera. Tsy vitsy ireo mihinana amam-bolony, tsy manadihady ny tena zava-misy marina eto amin’ny firenena, fa mionona amin’ireo filazam-baovao tsy marina.
Marihina anefa fa mifandrombaka sy mihazakazaka ny hampiasa vola eto Madagasikara avokoa ireo firenena vahiny. Hatramin’ny niverenan’i Madagasikara teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, izany hoe tamin’ity Repoblika fahefatra tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity, ankoatra ireo firenena efa mpiara-miasa amin’i Madagasikara hatramin’izay, tao anatin’ny dimy volana monja, izany hoe, ny volana septambra 2016 hatramin’iny volana janoary 2018 iny, dia firenena vahiny vaovao 10 no nanamafy ny fiarahany miasa. Vonona ny hampiasa vola eto Madagasikara amin’ny sehatra maro izy ireo.
Anisan’izany, ohatra, ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana na ny BAD, izay nanome vola mitentina 325 tapitrisa Euros, hanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana rehetra eto amin’ny firenena. Teo ihany koa ireo firenena hafa, toa an’i Espana, Korea Atsimo, Tiorkia, Indonezia, Cuba, Royaume-Unis, Pays-Bas, Repoblika Tseky, Rwanda, sns. Ireo voatanisa rehetra ireo dia samy nanambara tamin’ny alalan’ny masoivohony fa vonona ny hanampy sy hampiasa vola eto Madagasikara avokoa, indrindra eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin’ny firenena.
Tsara toerana aty Afrika
Ankoatra izay, dia manaporofo izany koa izao ny fandalovan’ny sekretera jeneralin’ny Comesa. Omaly ihany, dia nitsidika ny Filoham-pirenena teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny sekretera jeneralin’ny Comesa, Sindiso Ngwenga. Tamin’izany indrindra no nisian’ny dinidinika teo amin’ny roa tonta mahakasika ny fihaonamben’ny Comesa, izay hotanterahina any Bunjumbura, Burundi, ny 18 sy 19 avrily izao. Anisan’ireo firenena voaasa hanatrika izany fihaonana iraisam-pirenena aty Afrika izany i Madagasikara.
Voalaza fa tsara toerana, ary manana ny toerany eo anivon’ny Comesa i Madagasikara. Tamin’izany indrindra no niarahaban’i Sindiso Ngwenga manokana ny ezaka vitan’i Madagasikara amin’ny maha filohan’ny Comesa antsika. Tafiditra amin’izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena mpikambana eo anivon’nyvarotra iraisan’i Afrika Oriantaly sy Aostraly. Izany hoe, tombony lehibe ho an’i Madagasikara amin’ny fampandrosoana ny fametrahana sy ny fanatanterahana ireo tetikasan’ny Comesa, indrindra eo amin’ny fifanakalozana ara-barotra malalaka.